Co2 Gesi Shiled Welding Wire Vagadziri & Vanotengesa - China Co2 Gesi Shiled Welding Wire Factory
ER70S-G the welded seamu ine yakanyanya kukwirira uye kusimba simba
ER44-8 imhando yemamiriro ekunze ekudzivirira waya yemagetsi ine yakakwirira inonamatira emhangura kukwiridzira uye yakakwira ngura kuramba, yakagadzikana feya yakaonekwa musono, isina mashawi, yakanakisa kukwirisa maitiro ekugadzirisa.
ER70S-6 Inoshandiswa kunongedza kuvaka, muchina wekuvaka, kuvaka njanji uye zvimwe zvakawanda
Iyo yakadzika kabhoni simbi yemhangura-yakapfekerwa waya yemagetsi, yakakodzera 100% CO2 uye Argon & CO2 akasanganiswa gasi yakavharidzirwa welding, isu tinoedza kugovera welding nekucheka mhinduro uye kugadzira kukosha kwevatengi vekunze nevekunze.
ER70S-4 Inoshandiswa kune weld yakakwira tensile simbi pa490N / mm2 giredhi
Iyo yakadzika kabhoni simbi yemhangura welding waya yakakodzera CO2 gasi rakavharirwa welding. Iyo yekugoneka inogadzikana uye weld yakanaka. Pasina spatter, yakanaka yekuchetedza maitiro ekuita.
ER70S-3 isimbi yakapfava yemhangura yakakoshwa waya waya yakakodzera CO2 gasi inodzivirira welding
Iyo yakapfava simbi yemhangura-yakavharidzirwa simbi inomwaya waya, yakakodzera CO2 gasi rakachengetedzwa welding, ine yakagadzikana kuitika, yakanaka welds, shoma spatter uye yakanakisa welding maitiro ekuita.
ER49-1 Inoshandiswa kupeta ngarava kuvaka simbi uye nyoro zvigadzirwa zvesimbi zvine simba pa490N / mm2 degree
Iyo yakadzika-kabhoni simbi yemhangura-yakapfekerwa simbi yekuchinjisa waya neyakagwinya welding kuita uye yakakwirira kukanganisa kudzivirira pane yakadzika tembiricha.
nekubudisa Cored Arc Welding Wire , Welding Consumables , Flux Yakavirirwa Wire Anopa ,